XOG:- Xildhibaanadii sida weyn u mucaaradsanaa xukuumadda Kheyre oo badalay go’aankoodii hore – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Xildhibaanadii sida weyn u mucaaradsanaa xukuumadda Kheyre oo badalay go’aankoodii hore
Warar ay si hoose u heshay warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegaya inay jiraan xildhibaano ka mid ah 105-tii mudane ee mucaaradsaneyd xukuumadda cusub ee ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre inay dib uga laabteen go’aankoodii hore.
Xildhibaano ka badan 30 mudane ayaa naloo xaqiijiyey inay ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre u ballan-qaadeen inay meel-marin doonaan xukuumadda cusub, ayna dib uga laabteen mowqifkoodii hore.
Kulan habeenkii xalay ahaa xildhibaanada iyo ra’iisul wasaaraha ku dhexmaray xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa waxay ku lafa gureen sidii mudanayaasha kale ee diidan xukuumadda cusub wax looga dhaadhicin lahaa.
Maanta oo Arbaco ah ayaa xukuumadda cusub la horgeyn doonnaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana loo qaadi doonaa codka kalsoonida.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa waxay saadaashooda maanta u badinayaan in la meel-marin doono xukuumadda ra’iisul wasaare Kheyre.